पाइलटबिनै ‘हवाई ट्याक्सी’ उडाउने तयारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २२, २०७४ दिनेश यादव
काठमाडौं — सडकहरूमा बिना चालककै ट्याक्सी गुड्ने कुरा तपाईहरूले सुन्नुभएकै होला । ‘ड्राइभरलेस’ त्यस्ता कार/ट्याक्सीलाई मोडिफाइड गर्न विभिन्न कम्पनीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन् । सडकमा उतार्न यसका लागि तँछाडमछाड भइरहेकै बेला हवाई ट्याक्सी (एयर ट्याक्सी) उडाउने तयारी सुरु गरिएको छ ।
सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि अबको तीन महिनाभित्रै दुबईमा हावामा उड्ने ट्याक्सीको व्यावसायिक परीक्षण हुँदै छ । हावामा बिना पाइटलको यात्रा ? यो कुरो सुनेर तपाईंमध्ये धेरैको जीउ सिरिङ्ग पक्कै भएको होला । डर लाग्नु स्वाभाविकै पनि हो । किनभने हाम्रा वरपर रहेका कम्तीमा एक जना, जो कहिले पनि हवाई यात्रा गरेका छैनन, एभियोफोबिया (विमानमा चढ्नबाट डराउने) रोगले ग्रसित हुन्छन् । त्यो पनि व्यापारिक विमानमा, जसमा लाइसेन्स लिएका पाइलट हुन्छन् । तर बिनापाइलट हवाई ट्याक्सीमा यात्रा ? ‘ओहो, त्यो त झनै डरलाग्दो’ भन्नेहरू धेरै निस्किन सक्छन् । ‘तर, डराउनु पर्दैन, सुरक्षित यात्रा गर्न सकिने हवाई ट्याक्सी बनाउँछौं,’ निर्माता कम्पनीहरूको दाबी पनि रहँदै आएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ ०८:४६
काम थालेदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान पाउने
नयाँ श्रम कानुन
आश्विन २२, २०७४ होम कार्की
काठमाडौं — कामदारले काम थालेको दिनदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था भएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि अब स्थायी हुनुपर्ने छैन ।
पूर्वमा बढ्दै डिपार्टमेन्टल स्टोर संस्कृति
अर्गानिक मल थन्कियो
डन्डी उद्योगका कच्चा पदार्थ आयातमा अवरोध